သတင်း - Zhuhai Central Station (Hezhou) Hub နှင့် ၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ဧရိယာများအတွက် စိတ်ကူးစိတ်သန်းစီမံကိန်းနှင့် မြို့ပြဒီဇိုင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ ကြေငြာချက်
Zhuhai Central Station (Hezhou) Hub နှင့် ၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ဧရိယာများအတွက် စိတ်ကူးစိတ်သန်းစီမံကိန်းနှင့် မြို့ပြဒီဇိုင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ ကြေငြာချက်
2019 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် CPC ဗဟိုကော်မတီနှင့် နိုင်ငံတော်ကောင်စီတို့က Outline ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ကွမ်တုံ-ဟောင်ကောင်-မကာအို မဟာပင်လယ်အော်ဧရိယာအတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းယင်းတွင် မကာအို-ဇူဟိုင်၏ ခိုင်မာသောပေါင်းစပ်မှုများ၏ ဦးဆောင်အခန်းကဏ္ဍကို လွှမ်းမိုးရန်၊ ဇူဟိုင်းနှင့် မကာအိုအတွက် ဗျူဟာမြောက်အစီအစဥ်ကို မဟာပင်လယ်အော်ဧရိယာ၏ မကာအို-ဇူဟိုင်တိုင်ကို ပူးတွဲတည်ဆောက်ရန် အဆိုပြုခဲ့သည်။
2020 ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင်၊ဂွမ်ဒေါင်း-ဟောင်ကောင်-မကာအို ဂရိတ်ပင်လယ်အော်ဧရိယာရှိ အဝေးပြေးရထားလမ်း ဖောက်လုပ်ရေး အစီအစဉ်အမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ကော်မရှင်က အတည်ပြုခဲ့သည်။ဤအစီအစဥ်တွင်၊ Zhuhai Central Station (Hezhou) Hub သည် ပုလဲမြစ်၏အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းဧရိယာရှိ "ပင်မ ၃ နှင့် အရန်အချက်အချာကျသည့်အချက်အချာနေရာများ" တွင် အဓိကအချက်အချာကျသည့်အချက်အချာတစ်ခုအဖြစ် နေရာချထားပြီး၊ ၎င်းသည် ပျံ့နှံ့သွားလာနေသောလမ်းကြောင်းများစွာကို ဆက်သွယ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ Zhuhai-Zhaoqing HSR၊ Guangzhou-Zhuhai (Macao) HSR၊ Shenzhen-Zhuhai Intercity မီးရထားတို့ အပါအဝင် ကွန်ရက်ဖြစ်သောကြောင့် Zhuhai နှင့် Macao နိုင်ငံနှင့် ချိတ်ဆက်ရန် အရေးကြီးသော အချက်အချာကျသော အချက်အချာဖြစ်သည်။
ယနေ့အထိ၊ Zhuhai-Zhaoqing မြန်နှုန်းမြင့် မီးရထားနှင့် အချက်အချာကျသော စီမံကိန်းများ ပြီးစီးနိုင်ဖွယ် လေ့လာချက် အစီရင်ခံစာကို ပြီးစီးခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် စတင်တည်ဆောက်ရန် မျှော်မှန်းထားသည်။ ကွမ်ကျိုး-ဇူဟိုင်-မကာအို မြန်နှုန်းမြင့် မီးရထားအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်မှုများ၊ စတင်ခဲ့ပြီး တည်ဆောက်မှုကို 2022 ခုနှစ်တွင် စတင်ရန် စီစဉ်ထားသည်။ Zhuhai Central Station (Hezhou) Hub and Its Surrounding Areas အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စိတ်ကူးစိတ်သန်းစီမံကိန်းနှင့် မြို့ပြဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲကို Zhuhai မြူနီစီပယ်အစိုးရမှ မဟာဗျူဟာကျကျ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ Zhuhai Central Station (Hezhou) Hub ၏တန်ဖိုး။
Zhuhai သည် မကာအိုနှင့် နီးကပ်ပြီး Shenzhen၊ Hong Kong နှင့် Guangzhou တို့မှ မျဉ်းဖြောင့်အကွာအဝေး ကီလိုမီတာ 100 အတွင်းတွင် ပုလဲမြစ်ဝ၏ အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွင် တည်ရှိသည်။၎င်းသည် Greater Bay Area ၏အတွင်းပိုင်းပင်လယ်အော်၏အဓိကဧရိယာတွင်တည်ရှိပြီး Greater Bay Area ပေါင်းစည်းမှုတွင် အရေးကြီးသောဗျူဟာမြောက်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ပါသည်။Zhuhai Central Station (Hezhou) Hub နှင့် ၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများ ("the Hub and Surrounding Areas") သည် အရှေ့တောင်ဘက်ရှိ Guangdong-Macao In-depth Cooperation Zone ("Hub and Surrounding Areas") သည် Zhuhai ၏အလယ်ပိုင်းဧရိယာတွင် တည်ရှိပြီး အရှေ့တောင်ဘက်ရှိ Modaomen Watercourse နှင့် အရှေ့တောင်ဘက်ရှိ Guangdong-Macao In-depth Cooperation Zone တောင်ဘက်တွင် အလားအလာရှိသော မြို့လယ်ခေါင်အဖြစ် Hezhou နှင့် အနောက်ဘက်တွင် Doumen စင်တာနှင့် Jinwan စင်တာတို့ ကပ်လျက်။Zhuhai ၏ ပထဝီဝင်အနေအထားအရ တည်ရှိပြီး ဤဧရိယာသည် Zhuhai မြို့ပြနေရာ၏ "ဗဟိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့် အနောက်ဘက်သို့ချဲ့ထွင်ခြင်း" တွင် မဟာဗျူဟာမြောက်အချက်အချာကျသောအချက်ဖြစ်ပြီး အရှေ့နှင့်အနောက်ဘက်ရှိ Zhuhai ၏ ဟန်ချက်ညီသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် အရေးကြီးသောချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပုံ.၁ ပရောဂျက်တည်နေရာ၊ ဂွမ်ဒေါင်း-ဟောင်ကောင်-မကာအို ဂရိတ်ပင်လယ်အော်ဧရိယာ
ပုံ ၂။ Zhuhai နယ်မြေရှိ ပရောဂျက်တည်နေရာ
စီမံကိန်း ပေါင်းစည်းခြင်း နယ်ပယ်-ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 86 ကီလိုမီတာအကျယ်အဝန်းရှိသော Hezhou မြို့ပြဗဟို၊ Jinwan Center နှင့် Doumen Center တို့ကို လွှမ်းခြုံထားသည်။
အချက်အချာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဧရိယာများ ၏ အယူအဆဆိုင်ရာ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း နယ်ပယ်-ဧရိယာ 51 ကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းကာ မြစ်လမ်းကြောင်းနှင့် အဝေးပြေး အမြန်လမ်း ကွန်ရက်ဖြင့် ဝန်းရံထားပြီး အရှေ့ဘက်ရှိ Modaomen ရေသင်တန်း၊ အနောက်ဘက်ရှိ Niwanmen ရေလမ်း၊ မြောက်ဘက်တွင် Tiansheng မြစ်နှင့် တောင်ဘက်ရှိ Zhuhai ရိပ်သာတို့အထိ တိုးချဲ့ထားသည်။
Hub ဧရိယာ၏ မြို့ပြဒီဇိုင်း နယ်ပယ်-ပေါင်းစပ်မြို့ပြဒီဇိုင်းနယ်ပယ်သည် အချက်အချာကျသောဗဟိုချက်ဖြင့် ဧရိယာ 10 ကီလိုမီတာမှ 20 စတုရန်းကီလိုမီတာအထိ အကျုံးဝင်ပြီး မြောက်နှင့်အရှေ့ဘက်အထိ ကျယ်ပြန့်သည်။ဗဟိုအချက်အချာနေရာကို ဗဟိုပြု၍ ဒီဇိုင်းအဖွဲ့များသည် အသေးစိတ်ဒီဇိုင်းနယ်ပယ်အဖြစ် ၎င်းတို့ကိုယ်ကို ဧရိယာ 2-3 ကီလိုမီတာကို ပိုင်းခြားနိုင်ပါသည်။
ပုံ3Planning Convergence Scope နှင့် Planning & Design Scope
အမျိုးသား အထူးစီးပွားရေးဇုန်၊ ဒေသတွင်းဗဟိုမြို့နှင့် Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area ၏ တိုင်မြို့အဖြစ် Zhuhai သည် ယခုအခါ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပန်းတိုင်သို့ ရွေ့လျားနေပြီး မြို့ပြဗဟိုချက်၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ပိုမိုမြှင့်တင်ရန်၊ မြို့တော်၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အဆင့်မြှင့်တင်ရေးကို အရှိန်မြှင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။နိုင်ငံတကာ ပြိုင်ဆိုင်မှု သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် “Golden Ideas” ကို တောင်းခံရန် ရည်ရွယ်ပြီး “ကမ္ဘာ့အမြင်၊ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများ၊ ထူးခြားသော ဇူဟိုင်း အင်္ဂါရပ်များနှင့် အနာဂတ် ဦးတည် ပန်းတိုင်များ” လိုအပ်ချက်များ အရ Zhuhai ကို ခေတ်မီ နိုင်ငံတကာ အထူးစီးပွားရေး အဖြစ် အရှိန်မြှင့် တည်ဆောက်ရန် အာရုံစိုက် သွားမည် ဖြစ်သည်။ ခေတ်သစ်၏ တရုတ်ဝိသေသလက္ခဏာများဖြင့် ရပ်ဝန်း၊ ဂွမ်ဒေါင်း-ဟောင်ကောင်-မကာအို ဂရိတ်ပင်လယ်အော်ဧရိယာ၏ အရေးကြီးသော ဝင်ပေါက်အချက်အချာဖြစ်သော ပုလဲမြစ်ဝ၏ အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းနှင့် ကမ်းရိုးတန်းစီးပွားရေးခါးပတ်တွင် အရည်အသွေးမြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပုံစံတစ်ခု။
Zhuhai ၏ မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် HSR တည်ဆောက်မှု၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပြီး အချက်အချာကျသော နေရာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများ၏ မဟာဗျူဟာမြောက် တည်နေရာကို သတ်မှတ်ကာ Hezhou အနာဂတ်မြို့ပြစင်တာ၊ Jinwan Center နှင့် Doumen Center တို့နှင့် အချက်အချာကျသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးများကို အကဲဖြတ်ပါ။
HSR အချက်အချာကျသောတန်ဖိုးကို အပြည့်အဝအသုံးချပြီး၊ HSR အချက်အချာကျသောဧရိယာ၏စက်မှုလုပ်ငန်းပုံစံကိုလေ့လာပါ၊ "Station-Industry-City" ၏အရည်အသွေးမြင့်ပေါင်းစပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုး၏စုစည်းမှုကိုအရှိန်မြှင့်ပါ။
အကောင်အထည်ဖော်ပါ။Zhuhai Conceptual Space Development Planနှင့် "မြို့-ခရိုင်-မြို့သစ် (အခြေခံမြို့ပြအစုအဝေး)-ရပ်ကွက်" ၏ မြို့ပြဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အညီ စီမံကိန်းနှင့် အဆင်အပြင်ကို ဆောင်ရွက်ပါ။
ရထားပို့ဆောင်ရေး၊ မြို့ပြလမ်းများနှင့် ရေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စသည်တို့နှင့် HSR ၏ အော်ဂဲနစ်ချိတ်ဆက်မှုကို စနစ်တကျ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး အနာဂတ်ကို ဦးတည်သော၊ အစိမ်းရောင်၊ စွမ်းအင်ချွေတာရေး၊ ထိရောက်ပြီး အဆင်ပြေသော ပြည့်စုံသော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တစ်ရပ်ကို ဖော်ဆောင်ပါ။
"ဂေဟဗေဒနှင့် ကာဗွန်နည်းသော၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဘေးကင်းရေးနှင့် ခံနိုင်ရည်ရှိမှု" ၏ အခြေခံမူများဖြင့် လမ်းညွှန်ထားကာ၊ မြေနိမ့်ပိုင်းမြေပြင်၊ မြေဆီလွှာအရင်းအမြစ် မလုံလောက်မှု၊ ရေလွှမ်းမိုးမှုအန္တရာယ် စသည်တို့ကဲ့သို့သော ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းကာ ခံနိုင်ရည်ရှိသော မြို့စီမံခန့်ခွဲမှုကို ရှေ့တန်းတင်ပါ။ နှင့်ထိန်းချုပ်မှုဗျူဟာ။
ကောင်းမွန်သော သဘာဝဂေဟစနစ်နောက်ခံကို အသုံးချ၍ မြစ်ချောင်းများနှင့် ရေကွန်ရက်၊ ပိုက်လိုင်းကွန်ရက်၊ ဗို့အားမြင့်လိုင်းကွန်ရက် စသည်တို့ကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲကာ စဉ်ဆက်မပြတ်၊ ပြီးပြည့်စုံပြီး စနစ်တကျ ဂေဟစနစ် ကာကွယ်ရေးပုံစံနှင့် ပွင့်လင်းသော နေရာကို ဖန်တီးတည်ဆောက်ရန်၊ တံခါးပေါက် ကမ်းနားရှုခင်းပုံစံကို အထူးအသားပေးထားသည်။
ရေတိုနှင့် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကြား ဆက်ဆံရေးကို စနစ်တကျကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပြီး HSR တည်ဆောက်မှုအဆင့်နှင့်အတူ HSR နှင့် မြို့တော်ကြား ပေါင်းစပ်တည်ဆောက်မှုအဆင့်အတွက် အလုံးစုံစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပါ။
(1) စိတ်ကူးစီမံကိန်း (၅၁ စတုရန်းကီလိုမီတာ)
စိတ်ကူးစိတ်သန်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းသည် 86km² စီမံကိန်းပေါင်းစည်းမှုနယ်ပယ်အတွင်း စင်တာတစ်ခုစီနှင့် ဆက်ဆံရေးကို အပြည့်အဝထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်ဖြစ်ပြီး အစီအစဉ်နေရာချထားခြင်း၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာအပြင်အဆင်၊ စကေးထိန်းချုပ်မှု၊ ပြည့်စုံသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အဆောက်အဦများ၏ အလုံးစုံစီစဉ်မှု၊ ပုံစံနှင့်အင်္ဂါရပ်များနှင့် အဆင့်ဆင့်တည်ဆောက်မှုစသည့် အကြောင်းအရာများကို တုံ့ပြန်မည်ဖြစ်သည်။ .၊ မြို့ပြ spatial ပုံစံ ဆိုင်ရာ သုတေသန အားဖြင့်၊ စက်မှု ညှိနှိုင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ချိတ်ဆက်မှု။ယင်း၏စီမံကိန်းအတိမ်အနက်သည် ခရိုင်စီမံကိန်း၏ သက်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်။
1. ပေါင်းစပ်မြို့ပြဒီဇိုင်း (10-20 ကီလိုမီတာ)
အယူအဆဆိုင်ရာ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် အဓိကအချက်အချာအဖြစ် အချက်အချာကျသော ပေါင်းစပ်မှုနှင့်အတူ၊ ပုံ3တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း "စီမံကိန်းပေါင်းစည်းခြင်းနယ်ပယ်နှင့် စီမံကိန်းနှင့် ဒီဇိုင်းနယ်ပယ်" တွင် ပြထားသည့်အတိုင်း 10-20km² ဧရိယာအတွက် မြို့ပြဒီဇိုင်းပုံစံကို ပြင်ဆင်ပါ။မြို့ပြဒီဇိုင်းသည် ဆောက်လုပ်ရေးစကေး၊ အာကာသပုံစံ၊ ယာဉ်ကြောကျပ်တည်းမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပြင်းထန်မှုစသည်တို့ကို အဓိကထားဆောင်ရွက်ရမည်။အကြင်အသေးစိတ်အတိမ်အနက်သည် သဘောတရားဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဒီဇိုင်း၏အတိမ်အနက်သို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
2. အသေးစိတ်မြို့ပြဒီဇိုင်း (2-3 ကီလိုမီတာ)
ပေါင်းစပ်မြို့ပြဒီဇိုင်းကိုအခြေခံ၍ အသေးစိတ်မြို့ပြပုံစံရေးဆွဲရန်အတွက် ဒီဇိုင်းအဖွဲ့များသည် ဧရိယာအကျယ်အဝန်း ၂-၃ ကီလိုမီတာစတုရန်းကီလိုမီတာကို အသေးစိတ်ဖော်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။စည်းမျဉ်းရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်မှု၏ အတိမ်အနက်ကို ရောက်ရှိစေမည်ဖြစ်သည်။
ဤနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲကို Zhuhai Public Resources Trading Center (Website: http://ggzy.zhuhai.gov.cn) တွင် အဆင့်သုံးဆင့်အပါအဝင်၊ ဥပမာအားဖြင့် လေလံဆွဲခြင်း (ပုံမှန်ပြိုင်ပွဲများတွင် အရည်အချင်းစစ်အဆင့်နှင့်ဆင်တူသည်)၊ ယှဉ်ပြိုင်ညှိနှိုင်းခြင်း ပုံမှန်ပြိုင်ပွဲများတွင် ဒီဇိုင်းပုံစံနှင့် ဆင်တူသည်)၊ ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် အသေးစိတ်အချက်များ။
ဤနိုင်ငံတကာ ပြိုင်ပွဲသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ အသင်းများကို ဒီဇိုင်းဆွဲရန် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တောင်းဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။လေလံဆွဲသည့်အဆင့်တွင် (ပုံမှန်ပြိုင်ပွဲများတွင် အရည်အချင်းစစ်အဆင့်နှင့်ဆင်တူသည်) မှ ဒီဇိုင်းအဖွဲ့6ဖွဲ့ (လုပ်ငန်းစုများအပါအဝင်၊ အောက်ဖော်ပြပါ အလားတူ) မှ ဒီဇိုင်းအဖွဲ့6ဖွဲ့ကို ယှဉ်ပြိုင်မည့်အဆင့်တွင် ပါဝင်ရန် (ပုံမှန်ပြိုင်ပွဲများတွင် ဒီဇိုင်းပုံစံအဆင့်နှင့် ဆင်တူသည်) ကို ရွေးချယ်မည်ဖြစ်သည်။ )အပြိုင်အဆိုင်ညှိနှိုင်းမှုအဆင့်တွင် ဆန်ကာတင်အဖွဲ့ ၆ ဖွဲ့မှ တင်ပြသော ဒီဇိုင်းအဆိုပြုချက်များကို အကဲဖြတ်ပြီး အဆင့်သတ်မှတ်မည်ဖြစ်သည်။လက်ခံမှုလက်ခံရန်အတွက် Host သို့မတင်ပြမီ ပထမဆုရရှိသူသည် နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုယူနစ်၏အကူအညီဖြင့် သဘောတရားဆိုင်ရာအစီအစဉ်များကို ပေါင်းစပ်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ထို့နောက် Host မှ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ 1-3 ခုကို စီစဉ်ပြီး ထိပ်တန်း ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သုံးဖွဲ့သည် အဆိုပါ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများသို့ တက်ရောက်ရန် ၎င်းတို့၏ ဒီဇိုင်နာကြီးများ စေလွှတ်ရမည် (COVID-19 ကပ်ရောဂါ ကူးစက်ခံရကြောင်း အတည်ပြုခံရသူများသည် အွန်လိုင်းတွင် ပါဝင်နိုင်သည်)၊ အိမ်ရှင်မှ အခကြေးငွေမယူဘဲ၊ သူတို့အတွက် အကြံပေးကြေး။
1.ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာ ဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီများသည် အရည်အချင်းကန့်သတ်ချက်များမရှိဘဲ ဤပြိုင်ပွဲအတွက် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပြီး လုပ်ငန်းစုများကို ကြိုဆိုပါသည်။
2. နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ထူးချွန်သော ဒီဇိုင်းအဖွဲ့များ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကို အားပေးပါသည်။မြို့ပြစီမံကိန်း၊ ဗိသုကာပညာနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးစသည်ဖြင့် ဤပညာရပ်များပါ၀င်သော လုပ်ငန်းစုကို ဦးစားပေးပါမည်။
3. လုပ်ငန်းစုတစ်ခုစီတွင် အဖွဲ့ဝင်4ဦးထက်မပိုစေရပါ။လုပ်ငန်းစု၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှ ပြိုင်ပွဲအတွက် နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် သို့မဟုတ် အခြားလုပ်ငန်းစု၏အမည်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ခွင့်မပြုပါ။ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းကို ချိုးဖောက်ခြင်းအား မမှန်ကန်ကြောင်း ရှုမြင်ရမည်၊
4. အဖွဲ့ဝင်များသည် အဖွဲ့ဝင်များအကြား အလုပ်ခွဲဝေခြင်းကို သတ်မှတ်ပေးမည့် တရားဝင်ထိရောက်သော လုပ်ငန်းစုသဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးသင့်သည်။
5. ကြွယ်ဝသော လက်တွေ့ကျသော ဒီဇိုင်းအတွေ့အကြုံများနှင့် မြို့ပြအချက်အချာကျသောနေရာများတွင် အောင်မြင်သော ဒီဇိုင်းအဖွဲ့များ သို့မဟုတ် မြို့ပြအခြေခံဧရိယာများ၏ မြို့ပြဒီဇိုင်းများကို ဦးစားပေးပါမည်။
6. တစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် တစ်ဦးချင်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှ ပါဝင်ခြင်းကို လက်မခံပါ။
ဤပြိုင်ပွဲတွင်၊ လုပ်ငန်းစု၏ ဦးဆောင်ပါတီသည် ဤပရောဂျက်အတွက် “ဇူဟိုင်းအများပြည်သူအရင်းအမြစ်ကုန်သွယ်မှုစင်တာ (http://ggzy.zhuhai.gov.cn/)” မှတစ်ဆင့် ဤပရောဂျက်အတွက် လေလံတင်ရန် အီလက်ထရွန်းနစ်လေလံပွဲစာရွက်စာတမ်းများကို တင်ပြရမည်။လေလံဆွဲခြင်းစာရွက်စာတမ်းများတွင် အရည်အချင်းစစ်စာရွက်စာတမ်းများ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာလေလံစာရွက်စာတမ်းများ (ဆိုလိုသည်မှာ အယူအဆအဆိုပြုချက်) နှင့် အောင်မြင်မှုနှင့် ခရက်ဒစ်စာရွက်စာတမ်းများ ဟူ၍ အပိုင်းသုံးပိုင်းပါဝင်သည်။၎င်းတို့၏ လိုအပ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
(1) အရည်အချင်းစစ်စာရွက်စာတမ်းများအောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများ ပါဝင်ရမည်။
1) တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်၏ ID အထောက်အထားများ (သို့မဟုတ် ပြည်ပကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အတွက် အခွင့်အာဏာရှိသူ) နှင့် တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်လက်မှတ် (သို့မဟုတ် ပြည်ပကုမ္ပဏီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အတွက် ခွင့်ပြုချက်ပေးစာ)၊
2) လုပ်ငန်းလိုင်စင် (ပြည်တွင်းလေလံဆွဲသူများသည် စက်မှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးသော လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရှိသူ၏ လုပ်ငန်းလိုင်စင်မိတ္တူ၏ ရောင်စကင်ဖတ်ထားသော မိတ္တူကို ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ပြည်ပလေလံဆွဲသူများသည် လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ရောင်စုံစကင်န်မိတ္တူကို ပေးဆောင်ရမည်။ ။);
3) လုပ်ငန်းစုသဘောတူညီချက် (ရှိလျှင်);
4) လေလံအတွက် ကတိကဝတ်ပြုလွှာ၊
5) ထို့အပြင်၊ ပြည်တွင်းလေလံဆွဲသူများသည် (သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းစု၏ပြည်တွင်းအဖွဲ့ဝင်များ) သည် အသိအမှတ်ပြုခံရသူ၏ အချက်အလက်များကို တင်ပြရန် လိုအပ်သည် (Credit China [http://www.creditchina.gov.cn/]) မှ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားသော အကြွေးအစီရင်ခံစာဖြစ်နိုင်သည်။ ခိုင်လုံသော အကြွေးစာရင်း (သို့မဟုတ် ခရက်ဒစ်မှတ်တမ်း) နှင့် ဘဏ်ချေးငွေအစီရင်ခံစာ (ခရက်ဒစ်အစီရင်ခံစာ [သို့မဟုတ် အကြွေးမှတ်တမ်း] သည် Credit China ၏ ဝဘ်ဆိုက်မှ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားနိုင်သည်၊ ဘဏ်ခရက်ဒစ်အစီရင်ခံစာသည် ကုမ္ပဏီ၏အကောင့်ရှိရာ ဘဏ်မှ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသော ဘဏ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။)
(2) နည်းပညာဆိုင်ရာလေလံစာရွက်စာတမ်းများ(ဆိုလိုသည်မှာ အယူအဆ အဆိုပြုချက်)- သက်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ၏ လိုအပ်ချက်များ နှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက် ဇယားများ အရ ၎င်းတို့အား ဒီဇိုင်းအဖွဲ့များမှ တင်ပြရမည်။အယူအဆအဆိုပြုချက်တွင်၊ စာသားနှင့်ရုပ်ပုံများပါ၀င်နိုင်ပြီး ပရောဂျက်နားလည်မှုကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြရမည်။အဓိကပြဿနာများအပြင် အရေးကြီးပြီး ခက်ခဲသောအချက်များကို ဖော်ထုတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ပဏာမအတွေးအခေါ်များ၊ အတွေးအမြင်များ သို့မဟုတ် ရည်ညွှန်းနိုင်သောကိစ္စရပ်များကို ရှေ့သို့တင်ပြရမည်။ဒီဇိုင်းအဖွဲ့၏ နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကို ပံ့ပိုးပေးရမည်။နှင့် ဒီဇိုင်းအပေါ် ကူးစက်ရောဂါ၏သက်ရောက်မှုကို လျှော့ချရန် နည်းလမ်းများ၊ အစီအမံများ သို့မဟုတ် ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြရမည်။ဤအကြောင်းအရာများထဲတွင်၊ ပရောဂျက်ကို အသေးစိတ်နားလည်မှု၊ အဓိကပြဿနာများနှင့် ခက်ခဲသောအချက်များကို ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ပဏာမအတွေးအခေါ်များ၊ အတွေးအမြင်များ သို့မဟုတ် ရည်ညွှန်းနိုင်သောကိစ္စရပ်များကို အဆိုပြုခြင်းအပိုင်းသည် စုစုပေါင်းစာမျက်နှာ 10 အတွင်း (တစ်ဘက်တည်း၊ A3 အရွယ်အစား)၊နည်းပညာအဖွဲ့ကို တင်ပြခြင်းနှင့် ဒီဇိုင်းအပေါ် ကပ်ရောဂါ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လျှော့ချရန်အတွက် နည်းလမ်းများ၊ အစီအမံများ သို့မဟုတ် ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဖော်ပြခြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် စုစုပေါင်းစာမျက်နှာ 20 အတွင်း (တစ်ဘက်၊ A3 အရွယ်အစား)၊ထို့ကြောင့် စုစုပေါင်းအရှည်သည် စာမျက်နှာ 30 အတွင်း (တစ်ဘက်၊ A3 အရွယ်အစား) (ရှေ့၊ နောက်ဖုံးများနှင့် အကြောင်းအရာဇယားများ မပါဝင်)။
(3) အောင်မြင်မှုနှင့် အကြွေးစာရွက်စာတမ်းများအောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများ ပါဝင်ရမည်။
1) အလားတူပရောဂျက်အတွေ့အကြုံ (ယခင်ပရောဂျက်နှင့်ဆင်တူသောပရောဂျက်အတွေ့အကြုံ၊ စာချုပ်၏သော့စာမျက်နှာများ သို့မဟုတ် ရလဒ်စာရွက်စာတမ်းများစသည်ဖြင့် ပံ့ပိုးပေးသည့်ပစ္စည်းများ၊ ပရောဂျက်5ခုထက်မပိုစေရ);
2) အခြားသော ကိုယ်စားလှယ် ပရောဂျက် အတွေ့အကြုံ (လေလံဆွဲသူ၏ အခြား ကိုယ်စားလှယ် ပရောဂျက် အတွေ့အကြုံ၊ စာချုပ်၏ အဓိက စာမျက်နှာများ သို့မဟုတ် ရလဒ် စာရွက်စာတမ်းများ ကဲ့သို့သော အထောက်အပံ့ ပစ္စည်းများ၊ ပရောဂျက် ၅ ခုထက် မပိုစေရ)၊
3) ကုမ္ပဏီမှရရှိသောဆုများ (မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း လေလံဆွဲသူမှရရှိခဲ့သောဆုများနှင့် ဆုလက်မှတ်ကဲ့သို့သော အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများကို ပေးအပ်ရမည်၊5ဆုထက်မပိုစေဘဲ၊ ၎င်းတို့သည် မြို့ပြအချက်အချာနေရာများ သို့မဟုတ် မြို့ပြအဓိကမြို့ပြဒီဇိုင်းဆုများသာဖြစ်ရမည်။ နယ်မြေများ)။
မှတ်ချက်- အထက်ဖော်ပြပါ အချိန်ဇယားကို ဘေဂျင်းစံတော်ချိန်၌ အသုံးပြုပါသည်။အိမ်ရှင်သည် အစီအစဉ်ကို ပြင်ဆင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(1) ဤနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲ၏ ဆက်စပ်အခကြေးငွေများ (အခွန်မပါ) မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ပထမနေရာ:ဒီဇိုင်းဆုကြေးငွေ ယွမ် လေးသန်း (ယန်း ၄,၀၀၀,၀၀၀) နှင့် ဒီဇိုင်းအသေးစိတ်နှင့် ပေါင်းစည်းမှု အခကြေးငွေ ယွမ်တစ်သန်းငါးရာ (ယန်း ၁,၅၀၀,၀၀၀) တို့ကို ရရှိနိုင်သည်။
ဒုတိယနေရာ:ဒီဇိုင်းဆုကြေးငွေ ယွမ်သုံးသန်း (ယန်း ၃,၀၀၀,၀၀၀) ရရှိနိုင်သည်။
တတိယနေရာ-ဒီဇိုင်းဆုကြေးငွေ ယွမ်နှစ်သန်း (ယန်း ၂,၀၀၀,၀၀၀) ရရှိနိုင်သည်။
စတုတ္ထ မှ ဆဋ္ဌမ နေရာများ ၊၎င်းတို့တစ်ဦးစီသည် ဒီဇိုင်းဆုကြေးငွေ ယွမ်တစ်သန်းငါးရာ (ယန်း ၁,၅၀၀,၀၀၀) ရရှိနိုင်သည်။
(2) လေလံကိုယ်စားလှယ်ကြေး-ဆုရရှိသူခြောက်ဦးသည် လေလံအောင်ပွဲကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးသည့်နောက် အလုပ်ရက် 20 အတွင်း ကိုယ်စားလှယ်ကြေးအား လေလံကိုယ်စားလှယ်ထံ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ပထမဆုရှင်သည် ယွမ် လေးဆယ့်ကိုးထောင်နှစ်ရာငါးဆယ် (ယန်း 49,250.00) ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ဒုတိယဆုရှင်သည် ယွမ်သုံးသောင်းတစ်ထောင် (ယန်း ၃၁,၀၀၀.၀၀) ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။တတိယဆုရှင်သည် ယွမ် နှစ်သောင်းသုံးထောင် (ယန်း ၂၃၀၀၀) ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။စတုတ္ထမှ ဆဋ္ဌမဆုရရှိသူများသည် ယွမ် တစ်ဆယ့်ကိုးထောင် (ယန်း ၁၉,၀၀၀.၀၀) အသီးသီးပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
(3) ငွေပေးချေမှုစည်းမျဉ်းများစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးသည့်နောက် ရက်ပေါင်း 30 အတွင်း အိမ်ရှင်သည် ဆန်ခါတင်ဒီဇိုင်းအဖွဲ့တစ်ခုစီအား သက်ဆိုင်ရာဆုကြေးငွေကို ပေးချေမည်ဖြစ်သည်။ပထမဆုရှင်သည် အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် ပေါင်းစပ်မှုကို ပြီးစီးသောအခါ၊ ဒီဇိုင်းအသေးစိတ်နှင့် ပေါင်းစပ်မှုအခကြေးငွေကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသူမှ အတည်ပြုပြီး ရက်ပေါင်း 30 အတွင်း ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ငွေပေးချေမှုအတွက် လျှောက်ထားသည့်အခါ၊ ဒီဇိုင်းအဖွဲ့များသည် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးမှ အတည်ပြုထားသော ပရောဂျက်အချိန်ဇယား၏ အတည်ပြုပုံစံ၊ ငွေပေးချေမှုလျှောက်လွှာနှင့် တရားဝင်ပြေစာတို့ကို အိမ်ရှင်ထံ PRC ပမာဏ တူညီစွာ တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။အိမ်ရှင်သည် လုပ်ငန်းစု၏ ပြည်တွင်းအဖွဲ့ဝင်များကို RMB ဖြင့်သာ အခကြေးငွေပေးဆောင်ပါမည်။
အိမ်ရှင်- သဘာဝအရင်းအမြစ် Zhuhai မြူနီစီပယ်ဗျူရို
နည်းပညာပံ့ပိုးမှု- Zhuhai Institute of Urban Planning & Design
အဖွဲ့အစည်းနှင့် စီမံကိန်း- Benecus အတိုင်ပင်ခံ လီမိတက်
လေလံကိုယ်စားလှယ်- Zhuhai Material Bidding Co., Ltd.
ဤပြိုင်ပွဲ၏ သက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်အားလုံးသည် Zhuhai Public Resources Trading Center (http://ggzy.zhuhai.gov.cn/) ၏တရားဝင်ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ကြေငြာထားခြင်းဖြစ်သည်။
(https://www.szdesigncenter.org)၊ ABBS (https://www.abbs.com.cn/)
ဒီဇိုင်းအတွက် Shenzhen Center (https://www.szdesigncenter.org), ABBS (https://www.abbs.com.cn/)
မစ္စတာ Zhang +86 136 3160 0111
မစ္စတာ Chang +86 189 2808 9695
မစ္စ Zhou +86 132 6557 2115
မစ္စတာ Rao +86 139 2694 7573
ဤပြိုင်ပွဲကို စိတ်ဝင်စားသော ဒီဇိုင်းအဖွဲ့များ ကျေးဇူးပြု၍ စာရင်းပေးသွင်းပါ၊ သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းပြီး ဇူဟိုင်းပြည်သူ့အရင်းအမြစ်ကုန်သွယ်မှုစင်တာ (http://ggzy.zhuhai.gov.cn/) ၏ ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ကြိုတင်၍ ဆောက်လုပ်ရေးပရောဂျက်၏ လေလံဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းကို ဖွင့်လှစ်ပါ။လုပ်ငန်းစု၏ ဦးဆောင်ပါတီ (ပင်မအဖွဲ့အစည်း) သည် စျေးပြိုင်စာရွက်စာတမ်းများကို အပ်လုဒ်တင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် လေလံဆွဲသည့်နောက်ဆုံးနေ့မတိုင်မီ Zhuhai Public Resources Trading Center ၏ ဝဘ်ဆိုက်အတွက် CA ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ်ကို ရယူပြီး ရယူရမည်ဖြစ်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်အားလုံးသည် Zhuhai Public Resources Trading Center (http://ggzy.zhuhai.gov.cn/) မှ ထုတ်ပြန်သော အချက်အလက်များနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။
ဗိသုကာ အတွင်းခန်း Render Virtual Architect ဂိမ်း Rendering Engine Architecture စီးပွားဖြစ် လက်လီလက်လီအတွင်းခန်းဒီဇိုင်း တင်ဆက်ခြင်း။ အတွင်းခန်း 3d Rendering ဝန်ဆောင်မှုများ ၃ ထပ် လူနေ အဆောက်အဦ ဒီဇိုင်း ရေးဆွဲခြင်း။